9 असामान्य मजेदार खेल एक पेय संग
यदि तपाईंलाई आफ्नो मित्रहरु संग एक पेय हुन को लागी अर्को कारण चाहिन्छ।
प्रायः सम्भव छ
सबै तालिकामा बसिरहेका छन् र खेलाडीहरूले प्रश्न सोध्छन् "प्राय: सम्भव छ ....?" उदाहरणका लागि, "कुन ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँ च्यानिङ टुटम सबै सम्भावना छ?" वा "प्रायः कुन कुराले अर्कोको स्यान्डविच खाएको छ? कार्यालय फ्रिज? "तीन सबै खेलाडीको खर्चमा यो संकेत गर्न सक्छ कि यो। यदि तपाईलाई संकेत गरिएमा, तपाईंले प्रत्येक बिन्दुको लागि एक रक्सीको सेवा लिनु पर्छ।
2. अविवाहित व्यक्ति
सबै खेलाडीहरूले मजाक र बेवास्ता प्रस्तावहरूको स्क्रैपमा लेख्नु पर्छ। और अब प्रत्येक मा एक कागज को एक टुकडा खींचता छ र यसलाई पढ्छ, उनको अनुहार मा एक स्पष्ट अभिव्यक्ति राखन। ती व्यक्तिहरु जो ग्रिगल, मुस्कान वा किन्ड सुरु गर्न, दण्ड पाउनुहोस्।
मलाई मेरो खुट्टा महसुस हुँदैन ... मेरो खुट्टा छैन!
3. भंग कलाकारहरू
खेलाडीहरू कलाकार छनौट गर्नुहोस् र एक टाइमर सुरु गर्नुहोस्। कलाकारले चित्रको ठूलो पानामा चित्र खिच्न सक्छ, र खेलाडीहरूको कार्य चाँडै चित्रित वस्तुको अनुमान लगाउनै पर्छ। त्यसैले जब कलाकार आकर्षित हुन्छ, खेलाडीले भिन्नताहरू बाहिर पुर्याउँछ। एक पटक चित्र अनुमान गरिसके पछि - प्रेन्टरले समय हेर्छ। हरेक 20 सेकेन्डका लागि कलाकारले दाखमद्य वा वोदका शिर पिउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईले गरेको चित्रलाई अनुमानित मिनेटमा अनुमान गरिन्छ, त्यसपछि तपाईलाई5sips को शराब पिउन पर्छ।
के? के तपाईलाई पहिलो कक्षाबाट केटीहरू कसरी पिउने छैन भनेर थाहा छ?
4. म पट्टीमा जान्छु
पहिलो व्यक्तिले शब्दहरूसँग खेल सुरू गर्दछ: "म मोज्टियो (वा कुनै अन्य दुर्व्यवहार पेय) पिउन पट्टी जान्छु।" अर्को खेलाडीले वाक्यांश दोहोरिन्छ र अर्को पेय थप गर्दछ। वाक्यांश सूचीमा पहिलो त्रुटिमा विस्तार गरिएको छ। भ्रमित खेलाडीले राम्रो गिलास पिउनुपर्छ।
5. प्याकेज काट्नुहोस्
फर्शमा कागज पेटी राख्नुहोस्। प्रत्येक प्लेयरले यसलाई उठाउनको लागि आफ्नो मुखलाई झुन्ड्याउँदछ र प्रयोग गर्नुपर्दछ। ह्यान्डल पनि प्रयोगको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन। जो प्याकेज लिनु हुँदैन, दण्डित ढेर राख्नुहोस्। पहिलो राउन्ड पछि, प्याकेज छोटो छ,5सेन्टीमिटर बन्द। यो खेल जारी रहन्छ जब प्याकेजबाट एक तल बायाँ छ।
6. सही वा गलत
प्रत्येक खेलाडीले पेपर संज्ञाहरूमा लेख्छ। जब तपाईंको पालो आउँछ, तपाईंले पासा फेंकनुहुन्छ, कसैलाई नम्बर छोड्न अनुमति नदिने अनुमति दिइन्छ। एक संख्या पनि यसको मतलब छ कि तपाइँ कागजको टुक्रामा लेखिएको पेपरको टुक्रामा एक साँचो कथा बताउन आवश्यक हुनेछ। यदि अजीब आंकडा हड्डीहरूमा आइरहेको छ भने, तपाईलाई पक्कै पनि झूट बोल्नुपर्छ। र खेलाडीहरूले "सत्य" वा "झूटो" अनुमान गर्नुपर्दछ। आकाशमा अँध्यारो अनुहारले दण्डित ढेर पिउन पर्छ। यदि खेलाडीहरूले अनुमान गरेको छ भने, तपाईंले प्रत्येक राम्रो प्रतिक्रिया दिएको सहभागीका लागि एक एसप पिउन पर्छ।
7. हिप विरुद्ध थिच्नुहोस्
यो खेल सचमुच तपाईं एकअर्काको नजिक बनाउनुहुनेछ। कागजको टुक्रामा शरीरका भागहरू लेख्नुहोस् र तिनीहरूलाई ठीकसँग मिश्रण गर्नुहोस्। सबै खेलाडीहरू जोडामा विभाजित छन् र कागजको एक टुक्रा छान्नुहोस्। प्रत्येक जोडा शरीरको यी भागहरूमा बाहिरी रहनु पर्दछ। एकपटक साझेदारहरू विभाजित भएपछि (वा विभाजित) - उनीहरूले वोडका (वा अर्को पेय) ढिल पिउने गरी राम्रो रकम तिर्नुपर्छ।
सबैजना टेबल वरपर बसेका छन्, वोदका साथ ढोका। खेल सुरु गर्दै, सबै सहभागिताहरू उनीहरूको टाउकोमा टेबलमा निस्कन्छन्। तीनको खर्चमा सबैले अर्को खेलाडीलाई हेर्छन्। यदि तपाईं कसैलाई हेर्नुहुन्छ जुन अर्को तरिका देख्नुहुन्छ, तपाइँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। यदि तपाईं र तपाईंको समकक्ष हेर्दा सिधै एकअर्काको आँखामा - "मरासा" चिन्नुहोस् र नजिकको ढोका पिउनुहुन्छ। खेल समाप्त हुनेछ जब तालिकामा सबै शराब नशेको हुनेछ।
प्रत्येक प्लेयरले दुई चश्मा (खाली र पूर्ण) र चम्मच लिन आवश्यक छ। प्रतिभागिहरुसँग एक पूर्ण चम्मचबाट पेन्सन स्थानान्तरण गर्न एक चम्मचसँग रिक्त स्थानमा छ। सबै जो एक पूरा गिलास मा छोडिएको छ ठीक छ।
डिज्नी राजकुमारीहरूको बारेमा 20 तथ्यहरू तपाईलाई झम्काउनु हुनेछ
28 समस्याहरू जुन प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्तिले बुझ्दछन्
यो देखिन्छ: यी 35 फोटोहरूले कसरी "खराब" हामी हो!
मानिसजातिको इतिहासमा 25 सबैभन्दा खतरनाक महिलाहरू
सपनाहरु को बारे मा 25 अद्भुत तथ्यहरु
संसारमा 25 भन्दा धेरै महंगा खरिदहरू
19Pixar द्वारा एनिमेटेड कार्टून "पहेली" को बारे मा तथ्यहरु
कालीका रानी र कालीनका गुरु: 30 कार्बन मोनोअक्साइड फोटो!
तपाईले एक लाख जित्नुभन्दा चाँडै अनुभव गर्नु हुनेछ!
22 सबै भन्दा अधिक चौंकाने वाला फोटो मामा
53 "शीत हार्ट" को बारेमा तथ्याङ्कहरू जुन तपाइँ थाहा थिएनन्
समय मेशिन, वा ब्याक, 1 996मा!
फैशनी कपडे - वसंत-गर्मी 2015
भ्रूण को लक्षण - लक्षण
बरुवाट रेशमी मशरूम संग - मूल विचार एक साधारण व्यञ्जन को लागि
किफिर र कुखुरा पनीरमा दिन अनलोड गर्दै
कसरी राम्रो आमा बन्न सक्छु?
अल्सर को छेद
घर मा क्रोधहरुको लागि नुस्खा
Macy विलियम्स: "महिमाको प्रभावबाट मैले कहिलेकाहीं मेरो पुरानो जीवनमा लुकाउँछु"
मनोविज्ञानमा पुस्तकहरू कि महिला पढ्न योग्य छन्
ओल कला कला संग्रहालय
एक मंगा संग चीज
Umbilical hernia वयस्कों मा सर्जरी को बिना उपचार
लेनोर्डो डेक्यापियोले हल्का बालों वाला मोडेल द्वारा विजय हासिल गरेको छ
अम्बिलिकल हर्निया - सञ्चालन
आंतहरूमा दुखाइ - कारणहरू
माशा र प्लास्टिकिन देखि भालू
सानो बाथरूमको डिजाइन
आफ्नै हातले काठको बाड़
Conchita Wurst गीत प्रतियोगितामा निर्देशक हुन इन्कार गरे "यो2लेता छ"